❤️ IGTV Shopping isiyatholakala ku-Instagram - Facebook
Abakwa-Instagram bamemezele ekuqaleni kwale nyanga ukuthi ukuthenga kwe-IGTV manje sekusezingeni lomhlaba jikelele.
Impumelelo enkulu yesici sokuthenga iza ngemuva kokuphakelwa kwezindaba, izindaba nokuthunyelwe bukhoma kusetshenziswe ngamabhizinisi amaningi nabanikazi bomkhiqizo.
Kubikwe i-Instagram ukuthi cishe abantu abayizigidi eziyi-130 babuka izinto zokuthenga njalo ngenyanga.
Njengoba kunikezwe lezi zibalo, kwaba nengqondo ephelele Instagram qalisa umsebenzi wezitolo we-IGTV.
Inhloso yokuqala yokusebenza kwesitolo kwakuwukusiza amabhizinisi ukuthi akhule ngokuqhubekayo futhi, kusuka ku-Instagram, U-60% wabasebenzisi uyavuma ukuhlola nokuthola imikhiqizo emisha ku-Instagram.
Uma ungakasethi isitolo sakho se-Instagram okwamanje, sincoma ukuthi ukwenze. Izinto ziguquka ngokushesha kunakuqala, futhi isici sesitolo besilokhu sihehe kakhulu kubathengisi be-Insta.
Bezilusizo olukhulu kubasebenzisi ngokubasiza ukuthi bafinyelele izethameli zabo ngendlela elula nephumelelayo..
Ukuvuselelwa okusheshayo kwe-Instagram nezinguquko kuqinisekisa ukugcina abasebenzisi bazo babanjiwe. Ngemuva kwalokho, qiniseka ukuthi uyingxenye yayo bese uthwebula izithameli zakho ngokuthenga kwe-IGTV.
Kufanele usebenzise IGTV Shopping yomkhiqizo wakho?
Ukuthenga kwe-IGTV kuyithuba elijabulisayo labathonya nabadali abasebenzisa ipulatifomu yabo ukuxhumana nezithameli zabo, ukuthola imali eyengeziwe ngokuzikhandla.
Ukuthenga kwe-IGTV kuzokuvumela ukumaka imikhiqizo okhuluma ngayo kumavidiyo akho, ngqo kulawa mavidiyo.
Lokhu kusebenza kufana nalokho okuvumela ukumaka umuntu esithombeni., kepha ngokumaka umkhiqizo esikhundleni salokho.
Phambilini, abasebenzisi babenqunyelwe ekutheni bangayikhangisa kanjani imikhiqizo ababeyikhangisa kumavidiyo abo.
Ngenxa yamathuba wokumaka imikhiqizo, awusadingi ukushiya izixhumanisi eziningi kumazwibela wamavidiyo wakho.
Elinye ithuluzi elinamandla umsebenzi we-cashier, kepha okwamanje itholakala kuphela e-United States. Lapho isemhlabeni jikelele, izinto zizoshintsha unomphela.
Amandla wokubuka umkhiqizo, thinta ukuthenga nokuphuma ku-Insta kuzoshintsha indlela abantu abasebenzisa ngayo i-Insta ukuthenga.
Empeleni, U-70% wabathengi ubuyela ku-Instagram ukuzobheka imikhiqizo emisha.
Kuningi okushintshile ezinyangeni ezedlule, futhi kufanele uqiniseke ukuthi usebenzisa zonke izici ezikhona njengamanje esifundeni sakho ukukhulisa impumelelo yakho.
Ikusasa lokuthenga kwe-IGTV
Ukuthengwa kwe-IGTV kusethelwe ukuqhuma futhi kungahle kube yindlela engcono yokuheha amakhasimende akho.
Ngenxa yefomethi yevidiyo, ukuzwakala manje nemibhalo engezansi, okuqukethwe kwakho kufinyeleleka kalula kunanini ngaphambili. Okuqukethwe kwakho kufinyeleleka kalula, lapho izilaleli zakho zizoba nkulu. Lokhu ukumaketha kuyo yonke inkazimulo yayo.
Ngesikhathi ubhadane, I-Instagram yenze ibanga elide ukukhipha izici ezintsha ezifana nomsebenzi wesitolo, ikhodi ye-QR futhi manje IGTV Shopping.
Inhloso yabo enkulu kube ukusiza izinkampani, amamaki, abagqugquzeli nabantu ngabanye ukufinyelela amandla abo aphezulu.
Kufanele uthathe lesi sikhathi ucabange kabusha futhi wakhe kabusha amasu akho wokumaketha ngokusebenzisa ngokunenzuzo zonke izici abazinikelayo..
Ungazibamba kanjani izithameli zakho ngamavidiyo
Uma ufuna ukuthola okuningi ekuthengeni kwe-IGTV, okokuqala udinga ukuqinisekisa ukuthi ungaxhumana nezithameli zakho ngamavidiyo.
Amavidiyo angaba yindlela enamandla futhi elula yokukhulisa ubukhona bakho be-Insta, kuya ngokuthi ungaxhuma kanjani futhi uzibandakanye ngokujulile nezithameli zakho.
Amavidiyo akhombisa ukuzinikela kwakho futhi angasetshenziswa kalula ukwabelana ngendaba yomkhiqizo wakho. Awugcini ngokunikeza iwindi kulwazi lwakho, kepha izilaleli zakho nazo zingazizwa zinothando lwakho ngalokho okukhonzayo.
Kunezindlela eziningi zokuzibandakanya nezithameli zakho, Ngokwesibonelo:
• Qokomisa izici zemikhiqizo
• Yethula imikhiqizo emisha
• Okuqukethwe okukhethekile ngaphambi kokwethulwa komkhiqizo
• Ngezinhloso zemfundo
• Izikhathi zokuqeqesha
Landela imiyalo engezansi yokuthi ungayilayisha kanjani ividiyo bese uqala ukwabelana ngendaba yakho nabalandeli bakho namuhla..
23 Izindlela zika-2021Konke mayelana nokuphuma kwe-Instagram